Raysalwasaaraha Itoobiya Oo Waraysi Lala Yeeshay Kaga Hadlay Hoggaamintiisa Iyo Khilaafaadka Gobalka |
Hargeysa(GNN):-Raysalwasaaraha Itoobiya Abiye Axmed, ayaa waxa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay weriye Eskinder Fire oo ka tirsan idaacadda VOA, qaybteeda amxaariga, waraysiga oo ay Ingiriisi u turjuntay Idaacadda VOA qaybteeda Ingiriisida, ayaa waxa uu Wargeyska Geeska Afrika waraysigaas u turjumay Af Soomaali, waxaanu waraysigu u dhacay sidan:
Abiy Axmed:haddii aynu soo qaadano dhibta ka dhex jirta Somaliya iyo Kenya, waxaannu doonaynaa Eritrea iyo Koonfurta Suudaan iyo Itoobiya inay iska kaashadaan oo ay gacan iska siiyaan sidii arimahaas loo xaliyi lahaa. Waxaaynu ognahay in dhib kasta oo ka dhex jirta Somalia iyo Kenya ay nagu soo fidi karto. Sidaasdarteed, waaxanu doonaynaa inaanu ka wada shaqayno si loo xaliyo.
Su’aal:xuduudda u dhaxasya labada dal (Eritrea iyo Itoobiya) ilaa maanta way xidhan tahay. Xaaladdu waa sidee hada?
Abiy Axmed:markii geedi socodka nabadda ee labada dhinac uu bilaabmay, waxaaynu aragnay in xuduudii laga furay labada dhinac ba si balaadhan. Waxaynu odhan karnaa dadku labada dhinacba way u qulqulayeen – ma ahayn sidii dalal shisheeye oo kale, balse dhaqdhaqaaqu wuxuu la mid ahaa kuwa ka dhex dhaca dal gudihiisa. Ma jirin badhitaan adagi. Dad badan ayaa halkan iyo halkaas ba u socday. Balse taas oo keliya ma ahayn. Xubnaha mucaaradka Itoobiya ee saldhigoodu ahaa Eritrea ayaa ku soo noqday Itoobiya, xubnihii mucaaradka Eritrea ee saldhigoodu ahaa Itoobiya ayaa iyana ku noqday Eritrea.
Su’aal:marka la eego dhinaca is bedelka Itoobiya iyo dib-u-habaynta shuruucda , dadka qaar waxaay leeyihiin hadii talaabooyinka la qaaday ay yihiin kuwo ku filan in la arki ahaa natiijadood. Balse maadaama oo talaabooyinka la qaaday aanay ku filnayn waxa aynu aragnaa waa isla arimihii hore u jiray oo iska sii socda. Maxaad kaga jawaabaysaa?
Abiy Axmed:dadka oo dhan waa in loola dhaqmaa si isku mid ah sharciga hortiisa. Waa inaaan marna loo isticmaalin aar goosi. Marka aynu ixtiraamno isku xukunka sharciga, waa inay taas waafaqdaa. Marka dawladdu ay qaado talaabo, waxa jira qaar odhanaya go’aankan waxa qaatay qof ka soo jeeda qoomiyadayda ama bulshadayda. Ilaa fekerka caynkaas ahi uu dhamaado ama dabar go’, waxaay halis gelinaysaa suurtagalnimada in la ilaaliyo isku xukunka sharciga.